Taxadarka weelka dhalada
Taxaddarrada loogu talagalay isticmaalka dhalooyinka shumaca dhalada: Weelasha shumaca dhalada ah ee Winby si adag ayaa loo baaray oo loo hubiyey ka hor intaysan ka bixin warshadda. Iyada oo ay sidaa tahay, marka aad isticmaaleyso, waxaad weli u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato: Fadlan si taxaddar leh u saar waxyaabaha baakadaha ku jira si looga fogaado in faraha ama xoqitaan looga tago ...
Adeegsiga shumacyo udgoon
Hordhaca shumacyo udgoon Shumacyo udgoon ayaa noqday waddo lagu hagaajiyo dhadhanka nolosha. Shumacyo udgoon ayaa leh udgoon cusub oo macaan. Shumacyo udgoon ayaa ah nooc shumacyo farshaxan ah. Waxay hodan ku yihiin muuqaalka iyo midab qurux badan. Dhirta dabiiciga ah ...
Arrimaha u baahan fiiro gaar ah
Weelasha shumaca dhalada ah ee loo yaqaan 'Winby galaas shumacyo' ayaa si adag loo baaray oo loo baaray ka hor rarka. Sidaas oo ay tahay, marka aad isticmaaleyso, waxaad weli u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato: ☞ Fadlan si taxaddar leh u qaad duubbada si aad uga fogaato faraha ama xoqidda dhalada. Guud ahaan, koobka dhalada ah waxaa lagu buufiyay biyo-fadhi ...
Shumacyada udugga waxay u noqdeen hab lagu hagaajiyo dhadhanka nolosha. Shumacyo udgoon ayaa leh udgoon cusub oo macaan. Shumacyo udgoon ayaa ah nooc shumacyo farshaxan ah. Waxay hodan ku yihiin muuqaalka iyo midab qurux badan. Dhirta dabiiciga ah saliidaha lagama maarmaanka ah ee kujira gi ...
Shirkadeena shumaca ee Winby waa shirkad xirfadle ah oo soo saarta shumacyo udgoon, dhalooyinka shumaca, shumaca tiirarka iyo shumaca farshaxanka. Waxaan ka soo qeyb galnay Carwada Canton sanado badan, waxaana soo jiidanay macaamiil aad iyo aad u tiro badan oo ka kala yimid dalal badan oo adduunka ah. Ilaa hadda, wali ...